UBUMI BASEMTHETHWENI NGOTYALO-MALI eMoldova | IXESHA LE-100% LEMPUMELELO | ENGABEKI NXAXOLO | I-PASSPORT YESIBINI yeMoldova, Ukufudukela kwezoqoqosho ngokutyala eMoldova, ubummi ngotyalo-mali eMoldova, ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali eMoldova, ubumi ngo-i
Ubummi ngoTyalo mali lweMoldova kunye neGolden Visa
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho eMoldova:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eMoldova
● Ubummi ngotyalo-mali oluvela eMoldova
● IVisa yegolide eMoldova
● Ipasipoti yesibini evela eMoldova
● Ubummi ngotyalo-mali lweMoldova ngokutyala izindlu nomhlaba
Best Abameli bobuRhulumente ngoTyalo mali eMoldova Kunye namagqwetha ee Ubummi ngoTyalo-mali eMoldova kunye nabarhwebi bepropathi yokuthengisa izindlu nomhlaba kwiinkqubo zobuzwe eMoldova zisebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ubummi ngeearhente zotyalo-mali eMoldova zibonelela ngeendawo zokuhlala ngotyalo-mali eMoldova, Ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali eMoldova, Ubumi ngenkqubo yotyalo-mali eMoldova, Ubummi besibini ngotyalo-mali eMoldova, Ubumi bobabini ngotyalo-mali eMoldova, ubummi kunye nokuhlala ngokutyala eMoldova Ubummi ngokusisigxina ngotyalo-mali eMoldova, Ubumi bethutyana ngotyalo-mali eMoldova, Ubummi ngesikimu sotyalo-mali eMoldova, Ubummi ngezikimu zotyalo-mali eMoldova, Ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali eMoldova, Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali eMoldova, Ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eMoldova, okwesibini Ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali eMoldova, ukuhlala kubini ngotyalo-mali eMoldova, ukuhlala kunye nobumi ngokutyala eMoldova, ukuhlala kunye nobumi ngokutyala eMoldova, iinkqubo zokuhlala kwezoqoqosho eMoldova, Ukuhlala kwakhona ngesikimu sotyalo-mali eMoldova, Ukuhlala kwakhona ngezikimu zotyalo-mali eMoldova, okwesibini ipaspoti eMoldova, ipas yesibini iinkqubo zemidlalo eMoldova, ipasipoti yesibini eMoldova, ipasipoti yesibini eMoldova, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini eMoldova, ipaspoti yesibini yozakuzo eMoldova, ipasipoti yesibini kutyalo-mali eMoldova, ipasipoti yesibini yobumi eMoldova, iskim sepasipoti yesibini eMoldova, okwesibini Izikimu zokundwendwela eMoldova, i-visa yegolide eMoldova, ii-visa zegolide eMoldova, iinkqubo ze-visa zegolide eMoldova, inkqubo yegosa yegolide eMoldova, eyesibini visa yegolide eMoldova, inkqubo yesibini yegolide ye-visa eMoldova, i-visa yegolide ezimbini eMoldova, ubumi kunye ne-visa yegolide eMoldova, indawo yokuhlala kunye nevisa yegolide eMoldova, ubumi bevisa obusegolide eMoldova, inkqubo yevisa yegolide eMoldova, izikimu zevisa zegolide eMoldova.
"Izisombululo ezi-1 zokumisa" kubo bonke ubumi bakho ngotyalo-mali eMoldova ngenkxaso eyongezelelweyo.
Ubuncinci botyalomali eMoldova kubumi bobuTyalo-mali: EUR 100,000
Intshayelelo iMoldova kunye nobumi ngoTyalo-mali
Funda nzulu ngeMoldova
IMoldova, ilizwe lilele kwikona ekumantla mpuma engummandla weBalkan eYurophu. Idolophu elikomkhulu layo yiChisinau, ekumazantsi esi sizwe. Ngaphambili kwakusaziwa njengeBessarabia, le ndawo yayiyinxalenye esisiseko yommandla waseRomania waseMoldavia de kwangowe-1812, xa yanikezelwa eRashiya sisuzerain sayo, umlawuli woBukhosi baseOttoman. IBessarabia yahlala kwindawo yoBukhosi baseRussia de kwasemva kweMfazwe yeHlabathi yokuQala xa yajika yaba sisiqwenga seGreater Romania, yaza yabuyela kulawulo lwaseRussia ngo-1940-41 kwaye kwakhona emva kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi xa yadityaniswa isahlulo esinye kwi indawo eyadlulayo eUkraine, iMoldavian Autonomous Soviet Socialist Republic, kunxweme lasekhohlo loMlambo iDniester ukumisa iRiphabhlikhi yeSoviet Socialist Republic yaseMoldavia.
IRiphabhlikhi yaseMoldova lilizwe elingenamhlaba, licwangciswe phakathi kweRomania neUkraine. Uhlanga ngokwenyani luhlala lolona lizwe lunelishwa, luxhomekeke kakhulu kwiiasethi zaseRussia. Nangona kunjalo, ubuhlwempu buyancipha kwizinga elifanayo. Kwisiqulatho esingezantsi, ezona zinto zili-10 zibalaseleyo malunga neemeko zemihla ngemihla eMoldova ziyaziswa.
IMoldova lilizwe eliqhelekileyo ngokubanzi kwaye inabemi abazizigidi ezi-3.5. Omnye umlinganiso ophazamisayo kumbono wakhe okhutshiweyo sisantya esibi sokukhula kwenani labantu-iipesenti ezili-1.06.
IMoldova ifumana isimangaliso esibizwa ngokuba yi "mind channel", esiphembelela amazwe amaninzi angengawo amashishini kwihlabathi liphela. Iingcali ezinesiphiwo kuhlanga olunemingcele yokuvulwa kwemisebenzi ziyafuduka, ziphika ikhaya labo leengcali. Njengoko kubonisiwe nguDeutsche-Welle, kuvavanywa ukuba umsebenzi wesine waseMoldova usebenza phesheya, uninzi lwabo luxhaphaza ukuba ngabemi baseRomania, nto leyo ebenza bakwazi ukusebenza kuyo yonke i-European Union.
Ngenjongo yokuphela kokubamba inani elikhulu labasebenzi abanesiphiwo, zombini indawo yabucala kunye norhulumente waseMoldova babeka izibonelelo kubume bokuqalisa ubuchule. Ngaphandle kwento yokuba le inokuba lishishini elingenayo, ukudibanisa imeko yezobuchwephesha kufuneka incedise iMoldova ngokubamba iingcali ezinetalente, njengoko kubandakanya noqoqosho lwaseNtshona.
Iingcango ezivulekileyo zemali kwiRustic Moldova ngokuyintloko zithintelwe kushishino lwezolimo, nezikhundla ezinengeniso ezipakishwe kuluntu lwasezidolophini, umzekelo, kwikomkhulu iChisinau.
Ilungiselelo lolawulo lweMoldova luqhubele phambili ngokubonakalayo ukusukela inkululeko kwi-USSR. Ngokuqinisekileyo, ukungcola kuyaqhubeka, nangona kunjalo iMoldova sele ifezekisile isincomo "sasimahla" esivela kwiFreedom House International. Kananjalo, ilizwe livumile ukuCwangciswa koMbutho kunye ne-EU, oko kuthetha isiqinisekiso sokutshintsha kwemali kunye nokulindelwa kolawulo olukhulu lokulawula umanyano.
Okumangalisa kukuba, izinga lokufuna kwabantu lihle ukusuka kwiipesenti ezingama-68 ngo-2000 ukuya kwiipesenti ezili-11.4 ngo-2014.
Isikolo esibalulekileyo sinyanzelekile eMoldova. Isikolo samabanga aphantsi siquka uvavanyo olunye ukuya kolwesine, kwaye isikolo esincedisayo sahlulwe sangamabanga aphantsi naphezulu kuqeqesho kumabanga amahlanu ukuya kwasithoba, kunye ne-10 ukuya kwi-12 ngokukodwa. Ngokwenqanaba lokuthatha inxaxheba kwesikolo samabanga aphakamileyo kunye neqondo lokuphantse libe li-100%, isakhelo sesikolo saseMoldova sinazo zonke iimpawu zokuba sisebenza ngokugqibeleleyo.
Uhlanga lunengxaki ebalulekileyo yezonyango. Isiqhelo saseMoldova sisitya iilitha ezingama-18.22 zotywala obungangxengwanga minyaka le, phantse amaxesha ngamaxesha okuqhelekileyo kwe-6.1. Ezi ndlela zokusebenzisa utywala mhlawumbi zongeza kwithemba eliqaqambileyo lesizwe eliyiminyaka engama-67.4 yamadoda, kunye nama-75.4 abantu ababhinqileyo.
Iinkcukacha ezisisiseko sokuba ngabemi boTyalo-mali eMoldova
Ubuncinci botyalomali Ubummi ngotyalo-mali eMoldova
Imirhumo eyongezelelweyo visa yegolide ye iMoldavia
Ubummi ngotyalo-mali lweMoldova
Ukuqhubekeka kwexesha lokuba ngummi ngotyalo-mali lweMoldova
Iminyaka emi-5 yokugcina imeko yakhe yokuba ngumhlali wethutyana
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseMoldova
Iinketho zotyalo mali ze Ubummi ngotyalo-mali lweMoldova
Kutheni ufuna ukuya kubumi ngokutyala iMoldova
IMoldova imi kwiMpuma Yurophu. Lilizwe elithumela ngaphandle iwayini, ngelixa ezolimo kunye nomzi mveliso wokutya nawo kufanelekile. Inoqoqosho olukhula ngokukhawuleza, olunika amathuba amaninzi kumashishini. Nangona kunjalo, imeko yotyalo-mali ayisiyiyo ethandekayo, kwaye kubalulekile ukuba uchaze ukuba irhafu yomdibaniselwano yi-18%.
Ukufudukela kosapho eMoldova
Wena nawo onke amalungu osapho osondeleyo kufuneka nenze isicelo kunye. Oku akuthethi kuphela iqabane lakho kunye nabantwana abangaphantsi kweminyaka, kodwa bonke abantwana abaxhomekekileyo abangaphantsi kweminyaka engama-29, kunye nabazali bakho abaxhomekeke kuwe abangaphezulu kwama-55.
Ubumi Ngenkqubo yotyalo mali eMoldova
Ngenkqubo yokufaka isicelo seenyanga ezi-3, inkqubo yobumi botyalo-mali yaseMoldova ithathwa njengenye yeenkqubo ezikhawulezayo. Ngaphambi kwesicelo, wena (kunye nawo onke amalungu osapho lwakho afaka isicelo kunye nawe) kuya kufuneka ukuba nenze igalelo elingabuyiswayo kwiNgxowa-mali yoTyalo-mali yoLuntu yaseMoldova. Xa ufunyenwe wamkelekile, unokufaka isicelo sokuba ngummi waseMoldova - wena kunye namalungu osapho lwakho niya kuba namalungelo afanayo njengabo bonke abemi baseMoldova.
Imfuno yemali yeMoldova
Iindleko zenkqubo zenziwe ngezinto ezahlukeneyo. Kumfaki sicelo omnye, ubuncinci botyalo-mali yi-USD146,300; kusapho olunabantu aba-5, isaya kubiza imali engaphantsi kwe-USD250,000. Oku kuyenza ibe yenye yezona nkqubo zeYurophu zoqoqosho lokuba ngabemi.
Inkxaso yabathengi kubuZaleli ngotyalo-mali lweMoldova
Iqela lethu Ubumi ngaBameli boTyalo-mali eMoldova kwaye Ubumi ngoTyalo-mali Amagqwetha iMoldova ibonelela abaxhasi kunye neentsapho zabo eMoldova ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela eMoldova, ukuhlala ngokutyala imali eMoldova kunye namanye amathuba otyalo mali kwamanye amazwe, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngokutyala imali eMoldova okanye iVisa yaseGolden evela eMoldova okanye ubumi ngotyalo-mali oluvela eMoldova okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakwezona mali zilungileyo zokufumana izindlu eMoldova, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani IMoldova okanye elunxwemeni, izibonelelo zabasebenzi eMoldova nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwezemali nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi eMoldova nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo kubemi baseMoldova:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ubummi ngeenkonzo zotyalo mali iMoldova, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena iMoldova, abarhwebi abafudukela eMoldova abafikelelekayo, Ubumi obufikelelekayo ngabacebisi botyalo-mali eMoldova, Ubumi obufikelelekayo ngamagqwetha otyalo-mali eMoldova kunye nefemu yokubonelela ngokufuduka eMoldova
Ubumi ngokutyala imali ukusuka eMoldova ukuya kumazwe angama-37.
I-visa yegolide eMoldova ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eMoldova ukuya kumazwe angama-37.
Ukufuduka okusekwe kwishishini ukusuka eMoldova ukuya kumazwe angama-106.
Ubumi ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela eMoldova.
Iinkqubo zevisa zegolide eMoldova ziye kumazwe angama-37.
Ubumi beenkqubo zotyalo-mali ukusuka eMoldova ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka eMoldova ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eMoldova ukuya kumazwe angama-106.
Ubummi ngoTyalo-mali lwaseMoldova kwiiNdawo zokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo mali kwiarhente yokuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba eMoldova sinombono wokuba abathengi mabafumane imbuyekezo entle kutyalo mali eMoldova, nanini na, xa befuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo kubumi babo ngotyalo-mali lweMoldova. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa bezindlu eMoldova abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezintle eMoldova, befumana eyona mbuyekezo.
Eyona nkqubo yokuhlala kwabemi beMoldova ngotyalo mali kwizindlu nomhlaba eMoldova.
Kufuneka uyazi - Ubumi baseMoldova ngoTyalo mali
Ubummi ngeGqwetha loTyalo-mali eMoldova liza kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu ngokunikezela ngobumi bakho obuphumeleleyo ngokutyala imali eMoldova. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zobummi ngoTyalo mali eMoldova zibandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka eMoldova okanye eMoldova, ngokusekwe kwiziphakamiso ezinokwenziwa
Siqhuba inkuthalo yokuqala ngenxa yoku, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokuncoma ubumi ngokutyala iMoldova kubaxumi ukuze bafumane ubumi baseMoldova kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo eMoldova, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubeke nobumi bakho ngokufaka isicelo sotyalo-mali eMoldova kuya kufuneka ukuba sikhuphele iikopi zabathengi kunye namalungu epasipoti.
Ukuguqulelwa kunye ne-apostille yamaxwebhu Ubummi ngesicelo sotyalo mali seMoldova. Amagqwetha ethu akhethekileyo oBumi ngokutyala imali eMoldova kunye negosa legolide liya kunceda ekugcwaliseni iifom namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu obuzwe bakho kunye nawosapho lwakho afake isicelo sokutyala imali eMoldova, siya kuyizalisa ngabasemagunyeni abafanelekileyo baseMoldova.
Nje ukuba isicelo sakho sobuzwe ngokutyala imali eMoldova sivunyiwe, sabelana nawe ngeendaba ezimnandi kwaye siqala ukulungiselela ezinye inkxaso.
Asibuxhasi okanye sibunike ubummi ngeenkonzo zotyalo-mali eMoldova kubantu abathile okanye amashishini aseMoldova:
Ubumi ngeenkonzo zotyalo-mali eMoldova azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo kunye neembumbulu ezisuka eMoldova.
Ubumi ngeenkqubo zotyalo-mali lweMoldova azinikezelwanga ukugada ngobuchwephesha eMoldova okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya eMoldova.
Ubumi ngokubonisana notyalo mali eMoldova azinikezelwa ngayo nayiphi na into engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho eMoldova.
Ubumi ngenkxaso yotyalo mali iMoldova ayisiyonto yabantu abajongana nemathiriyeli yemfuzo eMoldova.
Ubumi ngeenkonzo zotyalo-mali eMoldova ayenzelwa amashishini ajongene nezixhobo ezinobungozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya eMoldova.
Ubumi ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeMoldova ayifumaneki kubantu beMoldova ejongene norhwebo, ukugcinwa eMoldova, okanye ukuthuthwa kwamalungu oLuntu.
Ubumi ngotyalo-mali iMoldova ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Ubumi iinkonzo zenkqubo iMoldova ayizizo ezenkolo kunye noncedo lwabo eMoldova.
Ubumi ngeenkonzo zotyalo-mali kwi iMoldavia ayibonelelwa ngabantu abajongana neMifanekiso engamanyala eMoldova.
Ubumi bethu Amagqwetha eMoldova abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eMoldova.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo afanelekileyo okuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubaxhasi beMoldova kunye ne-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva malunga nokwaliwa kwabasemagunyeni eMoldova ukuze kuvunywe isicelo Ubumi ngotyalo-mali eMoldova.
Ubummi ngotyalo-mali eMoldova nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sinikezela ngobumi obuBalaseleyo ngenkxaso yotyalo-mali eMoldova yotyalo-mali, yokufudukela kwelinye ilizwe kunye nokucwangciswa kwezindlu kunye noMhlaba eMoldova.
Ixhaswa bubumi bamazwe aphesheya ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho zaseMoldova, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Ubummi bethu ngeenkonzo zotyalo-mali eMoldova zibonelela ngexabiso eliphantsi, ngezinga elifanelekileyo lempumelelo eMoldova.
Sithathe iminyaka yamava sobumi bobabini eMoldova sixhasa abathengi kunye neentsapho zabo eMoldova.
Ukuba ngummi onamava ngabaceli botyalo-mali eMoldova kunye neearhente zomthetho zeMoldova zibonelela ngenkxaso kubathengi.
Sinezona solicitors zibalaseleyo kunye neearhente zenkqubo yokuphatha iMoldova kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Phambi kobumi bakho beMoldova nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu eMoldova
Sinamava aphesheya kubuMmi ngotyalo-mali kubandakanya iMoldova, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko apho ubummi bakho ngokutyala imali eMoldova kuyasilela, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzisayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zoBumi ngokuTyala eMoldova
Ukubala indleko zobuzwe ngokutyala imali eMoldova nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi beMoldova, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zoBumi ngenkqubo yotyalo-mali eMoldova kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa iMoldova
Inkqubo yeMvume yokuSebenza eMoldova
Ukuhlala okwethutyana eMoldova
Indawo yokuhlala eMoldova
Izindlu zoonozakuzaku kunye nabameli baseMoldova
Ubummi ngoTyalo-mali eMoldova kunye nezinye iiNkonzo
Sibonise ezinye iinkonzo ezimbalwa esizibonelelayo eMoldova ukulungiselela iimfuno ezikhawulezileyo okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukuhambisa usapho lwakho eMoldova ngokutyala, thina njengeqabane lakho leMoldova, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo eMoldova ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kobummi ngokubonisana notyalo-mali eMoldova, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zeHR nakwiMoldova, ongenakufumana phantsi kwesambrela esinye esibonelelwe nangabanye abacebisi baseMoldova basenza ivenkile yokumisa enye yeMoldova kunye namazwe angama-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nehlabathi jikelele kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini eMoldova ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu yokugqitha kubumi ngotyalo-mali lweMoldova ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokudibana eMoldova nakwamanye amazwe.
Singakunceda bhalisa inkampani eMoldova okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani eMoldova zitshiphu kuthi.)
Iakhawunti yeBhanki eMoldova
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eMoldova uya kuyidinga iakhawunti yebhanki yakho eMoldova kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eMoldova, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaphesheya.
Isango lokuhlawula eMoldova
Incase ufuna ukubonisana eMoldova, kuba izisombululo zentlawulo yedijithali eMoldova Njengendlela yokuhlawula yesiko okanye yefintech eMoldova okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuba ngummi ngotyalo-mali ukuze IMoldova ukuba ucwangcisa qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho eMoldova ukuqala kwangoko eMoldova.
Iinkonzo zabasebenzi eMoldova
yethu Inkampani yabasebenzi eMoldova inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona Izithuba ezikhoyo eMoldova free.
Iifowuni ezinyanisekileyo zeMoldova
Iinkqubo zeefowuni zeshishini eMoldova kunye amanani anyaniweyo eMoldova Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali eMoldova
Accounting, ngenxa yenkuthalo eMoldova kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo eMoldova
Ukuseta ishishini eMoldova
Emva kokuba ngummi wotyalo-mali eMoldova, ukuseta ishishini kwi iMoldavia.
Sinikezela ngezisombululo ezingezantsi ze-IT eMoldova
Uyilo lwewebhu eMoldova
Uphuhliso lwezoqoqosho kwiMoldova
Uphuhliso lwewebhu eMoldova
Uphuhliso lweBlockchain eMoldova
Uphuhliso losetyenziso eMoldova
Uphuhliso lweSoftware eMoldova
Amagqwetha obuMi ngoTyalo-mali eMoldova
Sinikezela ngoBumi baseMthethweni ngezisombululo zotyalo-mali eMoldova kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, kuba iMoldova, siziinkokheli, ifemu yethu yezomthetho eMoldova ineearhente zokufudukela eMoldova, sinodumo lokuhambisa awona mava asemagqabini okulungiselela abathengi eMoldova kunye Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseMoldova kunye neentsapho zabo. Ubumi bethu liqela lotyalo-mali eMoldova libonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala eMoldova, xa imvume yakho yokuhlala eMoldova ivunyiwe.
Amandla egqwetha laseMoldova liyafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngoBumi bobuGqwetha ngotyalo-mali eMoldova. Ukuba useMoldova okanye uceba ukutyelela iMoldova, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani lweMoldova kude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla waseMoldova. Kuxhomekeka kwilizwe ohlala kulo, kufanele ukuba ukhutshiwe okanye ubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli waseMoldova.
Imibuzo ebuzwa rhoqo- Ubumi ngoTyalo-mali eMoldova
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyala imali eMoldova?
Ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali eMoldova, kunokuchazwa njengokufumana ubume beMoldova ngotyalo-mali kuqoqosho lweMoldova ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, neshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali eMoldova, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eMoldova ixhaswe kukuhlala ziinkonzo zotyalo-mali eMoldova, ngokuhlala kwethu ngokugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eMoldova, indawo yokuhlala eyiyo ngamagqwetha otyalo-mali eMoldova kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi ngotyalo-mali eMoldova, ukusebenza ngokuhlala kakuhle ngabameli botyalo-mali eMoldova, kunye neefem eMoldova.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali eMoldova | Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eMoldova | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eMoldova | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo-mali eMoldova | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo-mali eMoldova
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngotyalo-mali eMoldova?
Ubummi ngotyalo-mali kwiMoldova, bunokuchazwa njengokufumana ubumi baseMoldova ngotyalo-mali kuqoqosho lweMoldova ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl njl. Faka isicelo sobummi ngotyalo-mali eMoldova, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali yaseMoldova exhaswa bubumi bobuhlali ngeenkonzo zotyalo-mali eMoldova, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eMoldova, ubumi obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eMoldova kunye nobumi obugqwesileyo ngabacebisi botyalo-mali eMoldova ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo-mali eMoldova, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eMoldova.
Iinkonzo zongeniso lwabatyali mali ezifikelelekayo eMoldova | Amaxabiso afikelelekayo okufudukela eMoldova | Utyalomali olufikelelekayo lwamagqwetha eMoldova | Abatyali mali abafikelelekayo eMoldova | Abatyali mali abangenakufikeleleka eMoldova | Iifemu zomthetho wofuduko olufikelelekayo eMoldova
Yintoni inkcazo yepaspoti yesibini eMoldova?
Ipasipoti yesibini eMoldova, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni beMoldova ngokutyala imali kuqoqosho lweMoldova ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sepaspoti yesibini eMoldova, inkqubo yesibini yepasipoti yeMoldova ixhaswe Iinkonzo zokundwendwela zesibini eMoldova, ngokusebenzisa amagqwetha ethu esibini epasipoti eMoldova, amagqwetha esibini eepasipoti eMoldova kunye nabaphenyi besibini abaphumeleleyo eMoldova, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela eziseMoldova, kunye neefem zokubonelela ngokufuduka eMoldova.
Iinkonzo zokundwendwela zesibini zeMoldova | Iiarhente zokundwendwela zesibini eMoldova | Amagqwetha esibini epasipoti eMoldova | Amagqwetha esibini epasipoti eMoldova | Abacebisi bokundwendwela besibini eMoldova
Yintoni inkcazo yevisa yegolide eMoldova?
I-visa yegolide eMoldova, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala eMoldova ngotyalo-mali kuqoqosho lweMoldova ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, izindlu nomhlaba, njl. Faka isicelo sevisa yegolide kwiMoldova, inkqubo yegosa yegolide yeMoldova ixhaswe yi Iinkonzo zeVisa zegolide eMoldova, ngokusebenzisa amagqwetha ethu egolide eMoldova, amagqwetha egosa aseGolden aseMoldova kunye nabacebisi begosa abangcono begold eMoldova, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide eMoldova, kunye neefem zokubonelela ngokufudukela eMoldova.
Iinkonzo zevisa ezimnandi zeMoldova | Iiarhente zevisa ezimnandi eMoldova | Amagqwetha egosa egolide eMoldova | Amagqwetha egosa egolide eMoldova | Abacebisi begosa begolide baseMoldova
Luthini ubuncinci lotyalo-mali kubumi ngotyalo-mali eMoldova?
Ubuncinci botyalo-mali kubumi ngotyalo-mali eMoldova yi-EUR 100,000.
Ngaba uyabonelela ngenkxaso yezomthetho yeMoldova yobumi bobuzwe ngotyalo-mali?
Ewe, igqwetha lethu eMoldova kunye neearhente eMoldova zibonelela ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali eMoldova.
Ngaba ubummi ngotyalomali eMoldova bunendleko?
Iindleko zobummi ngoTyalo-mali eMoldova kunye nobummi ngeemfuno zengxowa mali yotyalo-mali eMoldova yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo wokubonisana ngobuzwe ngoTyalo-mali eMoldova, sikwanikezela ngenkxaso-mali eninzi yokuba ngabemi bobuRhulumente ngezisombululo zotyalo mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokufaka isicelo sobumi ngokutyala imali eMoldova okanye kwi-visa yotyalomali eMoldova?
Ubummi beenkonzo zotyalo-mali ezinokuthi zisetyenziswe ngabemi beliphi ilizwe kodwa imizekelo embalwa bubuMmi ngotyalo-mali eMoldova oluvela eAsia, Ubumi ngotyalo-mali eMoldova oluvela eAfrika, Ubummi ngotyalo-mali eMoldova oluvela eYurophu, Ubumi ngotyalo-mali eMoldova oluvela eMzantsi Melika, Ubummi ngotyalo-mali eMoldova ukusuka eMalaysia, Ubummi ngotyalo-mali eMoldova buvela e-Bangladesh, Ubumi ngotyalo-mali eMoldova buvela e-Indonesia, Ubumi ngotyalo-mali eMoldova buvela eSri Lanka, Ubumi ngotyalo-mali eMoldova ukusuka eNepal, Ubumi ngotyalo-mali eMoldova ukusuka eIndiya kunye nobumi ngokutyala imali kwiMoldova isuka e-UAE.
Ubumi bobuGcisa ngesiKhokelo kuTyalo mali iMoldova
Cela ukubonisana simahla kubumi bakho ngoTyalo-mali eMoldova
Amagama abalulekileyo kubumi ngoTyalo mali lweMoldova
Iziko loLawulo loLuntu
I-National Bureau of Statistics yeRiphabhlikhi yaseMoldova
I-Arhente yoMbuso yeSizwe
IBhanki yeHlabathi kwiRiphabhlikhi yaseMoldova
INkundla yeAkhawunti yeRiphabhlikhi yaseMoldova
Iphepha lewebhu elisemthethweni lePalamente yeRiphabhlikhi yaseMoldova
Iphepha lewebhu elisemthethweni leChamber of Commerce kunye neRiphabhlikhi yeRiphabhlikhi yaseMoldova
Umthetho weRiphabhlikhi yaseMoldova
Ukubeka iliso ngokusesikweni kwiRiphabhlikhi yaseMoldova
IBhunga eliPhezulu looMantyi
IBhanki kaZwelonke yaseMoldova
INkundla yoMgaqo-siseko yeRiphabhlikhi yaseMoldova
Ingxowa mali yeMali yeHlabathi kwiRiphabhlikhi yaseMoldova
Iphepha lewebhu elisemthethweni likaRhulumente weRiphabhlikhi yaseMoldova
Iziko Lamalungelo Abantu kwiRiphabhlikhi yaseMoldova
IArhente yoKhenketho yeRiphabhlikhi yaseMoldova
Umsebenzi we-OSCE kwiRiphabhlikhi yaseMoldova
Utyalomali lwaseMoldova kunye noMbutho wokuKhuthaza ukuThumela ngaphandle
Iphepha lewebhu elisemthethweni le-Academy yezeNzululwazi zaseMoldova
Umbutho weZizwe eziManyeneyo kwiRiphabhlikhi yaseMoldova
Iphepha lewebhu elisemthethweni leRiphabhlikhi yaseMoldova
Inkqubo yoPhuculo lweZizwe eziManyeneyo kwiRiphabhlikhi yaseMoldova
INkundla ePhakamileyo yezoBulungisa yeRiphabhlikhi yaseMoldova
Hlanganisa kwi ISebe lokuFudukela eMoldova , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eMoldova